Umgaqo-nkqubo wokuBuyisa imali kwiDijithali- Gamepron
Ukuhlaziywa kokugqibela: Aug 8, 2021
Iimveliso zethu ngoku zithunyelwa ngokukhuphela kwi-Intanethi kuphela. Emva kokuba ukuthengwa kwakho kuvunyiwe siya kuyenza i-oda yakho. Ii-odolo ziqhubekeka kwiyure enye (1) kodwa zinokuthatha ixesha elingangeeyure ezingamashumi amabini anesine (24) ukugqiba. Nje ukuba i-odolo yakho yenziwe, siza kukuthumela i-imeyile yokuqinisekisa usebenzisa idilesi ye-imeyile oyinike kwifomu yoku-odola.
Le imeyile iya kusebenza njengeerisithi yakho yokuthenga ngekhompyutha kwaye iya kuba neenkcukacha ozifunayo ukufikelela kwimveliso yethu yokukhuphela.
Ukhuphelo olusuka kwiiseva zethu lujongwa ngononophelo ukuqinisekisa ukuba uyakwazi ukufikelela ngempumelelo kwiimveliso zethu. Ngelixa siguquguqukayo kwaye sikuvumela ukuba ugcwalise inani elifanelekileyo lokukhutshelwa asiyi kukunyamezela ukusetyenziswa gwenxa kokukhuphela. Sinelungelo lokuphelisa ukufikelela kwakho kwiiseva zethu zokukhuphela.
Simi ngasemva kweemveliso zethu kwaye ukoneliseka kwakho kubalulekile kuthi. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba iimveliso zethu zizixhobo zedijithali ezithunyelwa kukhuphelo lwe-Intanethi asibonisi mbuyekezo.
Nje ukuba isitshixo / ukhuphelo luziswe / lujongwe uyavuma ukuwangawangisa onke amalungelo okubuyiselwa imali. Akukho mbuyekezo iya kukhutshwa wakube ukhuphele / ujonge isitshixo njengoko sisibala njengokuhlawulelwa.
Ngaphambi kokuthenga ii-hacks, kuya kufuneka uqonde ukuba kwiimeko ezinqabileyo abasebenzisi banokufuna ukufaka iiwindows zabo ukulungisa umba wabo ngokukhohlisa, ngamanye amaxesha umsebenzisi unofakelo oludala okanye olonakeleyo lweWindows, ukuba umthengi uyala ukubuyisela, isicelo sokubuyiselwa imali siya kuba inqatshelwe.
Ukuba umdlalo uhlaziyiwe, khumbula ukuba ukukopela kuya kufuneka kuhlaziywe nako. Isicelo sokubuyiselwa kwemali esingaxhunyiwe kwi-intanethi / imveliso yokuhlaziya siyakwaliwa.
Ngayiphi na imeko unombuzo malunga nomgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali, ungawuthumela nge-imeyile [email protected]